पुष्पको फिल्ममा नाम परिवर्तन किन ? « Mazzako Online
पुष्पको फिल्ममा नाम परिवर्तन किन ?
अभिनेता पुष्प खड्का जोडिएपछि फिल्मको नाम परिवर्तन किन हुन्छ होला । तर, भैरहेको यही नै छ । पुष्प खड्का र अभिनेत्री वर्षा सिवाकोटीको मुख्य भूमिका रहने गरि फिल्मको नाम चालबाज राखियो । फिल्मको छायांकन सिक्किममा भयो । तर, फिल्मको एउटा गीत छायांकन गर्दासम्म फिल्मको नाम परिवर्तन भएको छ ।
फिल्मको नाम अब मनसँग मन राखिएको छ । फिल्मको एउटा गीतमा अभिनेता पल शाह र अभिनेत्री पुजा शर्माले अभिनय गरेका छन् । फिल्म रेड वाइन बनाउन निर्देशक रमेश एम के पौडेल तयार भए । फिल्मका लागि पल शाह र साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह फाइनल भए । तर, पछि पलले फिल्म छाडे र अभिनेता पुष्प खड्का फिल्ममा जोडिए ।
पुष्प जोडिएपछि फिल्मको नाम पनि परिवर्तन भयो । अब, यो फिल्मको नाम तिम्रो मेरो साथ राखिएको छ । फिल्ममा पुष्प जोडिएपछि नाम परिवर्तन किन भएको होला ? कि फिल्म क्षेत्रमा आउँदा नै पुष्पको नाम पुष्पल राखिएको हो कि ?